Fantastic Android Places Game Download aad ka ogaato
Qaybta 1. 10 websites Top u duuban ugu wanaagsan kulan android
Qaybta 2. Top 10 dhufto ee ka meesha aad kala soo bixi kartaa kulan android
Qaybta 3. Qaado gacanta ku telefoonka aad smart la MobileGo
Android telefoonada smart waxa ay noqonayaan aadka loo jecel yahay ka mid ah dadka haatan maalmood. Iyada oo ay caanka ah oo ka mid ah smart telefoonada, ee Chine android samaynayso meel gaarka ah ee suuqa. Sidaas maleh haddii aad tahay Forbes ayaa kulan ama ma; kaliya aad u jeclaan doonaa si cabbayso telefoonka smart leh ugu fiican kulan android ee suuqa. Waxa jira dhowr hab oo aad kala soo bixi kartaa ugu fiican kulan android aad telefoonka.
Qaybta 1. Top 10 Shabakadaha u dajinta Best Android Games
Waxaa jira kumanaan websites hadda maalmood oo sheegan jiray kulamadan oo android lacag la'aan ah. Laakiin marka ay timaado cabbayso aad telefoonada smart la kulan, hubaal aad rabto in aad waxba laakiin ugu fiican! Sidaas halkan waxaan ka dhigay liiska qaar ka mid ah website-yada ugu wanaagsan ee ka halkaas oo aad si fudud u soo bixi kartaa hogaanka trending kulan android.
Google Play waa website-ka rasmiga ah ee soo degsado oo dhan kulan android. Waxaad ka heli kartaa ku dhawaad ​​halkan ciyaar kasta oo caan ah oo la hir kala saaraa. Marka aad guji cagaaran rakibi button, ciyaarta waxaa si toos ah lagala soo bixi oo lagu rakibay qalabka xiran aad. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Android Games Room waa website u gaar ah in ay ku faantaa oo ay tiro aan xad lahayn oo kulan android. Kulamadan oo waxaa loo kala saaraa sidii kulan taagan oo keliya iyo ciyaaraha online. Waxay si toos ah lagala soo bixi karaa website-ka iyo aad si fudud u hubin karo rating! Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 254.236
1 Mobile waa website la yaab leh u soo degsado aad kulan android jecel lacag la'aan ah. Bogga internetka ee waxaa la hir kala saaraa iyadoo Screenshot ka ciyaarta. Waxa kale oo aad ka heli kartaa barnaamijyadooda ugu dambeeyay oo kulan hoose ee shaashadda. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 25.550
App Rob waa website si buuxda faanaa ee Chine android, iPhone iyo iPad. Chine Kuwaas oo kulan gebi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha iyo ay si sahal ah lagala soo bixi karaa website-ka kaliya click hal. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 1.635.863
Haddii aad indhaha ku heynaa u duuban kulan android si xor ah u telefoonka, markaas wax ka khayr roon booqanaya website-ka Android Apps. Liis dhamaystiran oo kulan android oo ay la socdaan Screenshot iyo sharaxaad joogaan internetka. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 248.725
Android 6. Play
Ma waxaad tahay qof waalan oo ku saabsan kulan android? Haddii ay haa tahay, markaas waa inaad booqato website-ka Play Android madadaalo ah aan xad lahayn in ay bixiyaan si ay u soo booqda ay. Kulan free Unlimited, dib u eegista iyo wareysiyo shakhsi ka ku dhiirigelinayaan in uu sameeyo website-ka qiimo booqanaya. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 990.822
Haddii aad raadinayso kulan android, barnaamijyadooda, wallpapers iyo mawduucyada, markaas Apps APK waa meel ku fiican aad u! Sharaxaad yar oo app ah, oo ay la socdaan in ay sharaxaad, dib u eegista iyo taariikhda la sii daayo oo aad ka caawisaa in uu go'aan fiican in aad rabto in aad ka soo dejisan ama ha. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 26.317
App Doll yahay guri si ay Android iyo sidoo kale barnaamijyadooda macruufka iyo ciyaaraha. Waxaad heli doontaa fursad u sahlan ee degsado kulan la kaliya click hal. The rating iyo shaashadda aad ka caawin doonaa in go'aan ka fiican. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 10.303.791
9. Android jilicsan Free
Android jilicsan Free waa website online in siinayaa fursad ay ku soo bixi si fudud kulamada android qalabka aad. The downloads ugu sareysa ee liiska idin ​​tusiyo, qaar ka mid ah kulamada ugu caansan soo bixi dadka. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 6.671.469
Handster waa mid ka mid ah website-yada ugu wanaagsan suuqa ugu soo degsado kulan android aan wax lacag ah bixinin hal. Waxaad aan kala soo bixi kartaa oo keliya barnaamijyadooda android laakiin sidoo kale barnaamijyadooda Windows, Java, Symbian, Blackberry oo ka iPhone website-kan. Fadlan riix halkan si aad u booqato website-ka.
Alexa rating: 3.515
Qaybta 2. Top 10 Ajandooyinka ka Halkee aad kala bixi karto Android Games
Google Play Store waxaa daadadku la tiro ka mid ah barnaamijyadooda laakiin waxaa jira dhowr qalabka android ka app waxan weyn oo waa la geli karin. Oo weliba waxaa jira barnaamijyadooda badan oo aan laga heli karaa dukaanka Google. Maaddaama ay sababahan midkooda, dadka had iyo jeer raadiyaan kale oo ka halkaas oo ay ku soo bixi karaan barnaamijyadooda ciyaaraha android ay lacag la'aan ah. Halkan waxaa ku qoran liiska 10ka dhufto ee ka halkaas oo aad si fudud u soo bixi kartaa adiga oo kulan lacag la'aan ah:
Mid ka mid ah fursad kale oo fiican ee suuqa Google waa App Amazon ee Store. Laga heli karaa labada qeybood oo internet-ka iyo app ku salaysan, Amazon App Store uusan aad u baahan tahay si ay u tagaan Google Play Store u duuban kulan aad ugu jeceshahay. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa in-app iibsadaan dhex kaydkan.
Platform: Android 2.2 iyo wax ka sareeya.
2 Oo App Store
A app aad u fudud u soo degsado kulan aad jeceshahay, Iyo App Store ayaa sidoo kale siinayaa dadka isticmaala ay xarunta ay si dhakhso ah ku jira kumanyaalka reer kulan halkan ku qoran maraan. Waxa kale oo aad ka arki kartaa sharaxaad kooban oo user rating-of-ada laga heli karo halkan.
Appitalism waa app android dukaanka internetka ku salaysan la yaabtid ama bulshada ah. The rating, dib u eegista iyo "barnaamijyadooda kulul" qaybta dhigo mid u gaar ah. Oo weliba waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda ciyaaraha taas oo aan laga heli karaa dukaanka Play Google.
Platform: Windows Operating System iyo Mac OS.
Ma dooneysaa inaad ogaato kulamada ugu danbeeyay in saaxiibadaa waxa ay u ciyaarayaan? Appoke waa app bulsho isku xirka kaas oo kuu ogolaanaya in aad eegto, waayo, kulan cusub oo aad saaxiibo u ciyaarayaan. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa kulan si dhakhso ah iyada oo app.
Ma doonaysaa in ay si toos ah u soo bixi kulamada android ugu farxada badan ka dhiirigelinayaan in uu? Aptoide saamaxaya kuwa isticmaala in ay ka soo dejisan iyo qaybiyo tirada xad lahayn ee Chine android si deg deg ah. The barnaamijyadooda halkan ku qoran ayaa sidoo kale updated waqti ka waqti.
F-Droid waa il furan dukaanka app android halkaas oo aad ka heli karto versions kala duwan ee Chine ciyaaraha taas oo si fudud loo soo bixi karaa in qalab aad.
GetJar waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee soo degsado kulan android lacag la'aan ah. Waa app web-ku salaysan si aadan in aad kala soo bixi ama rakibi app this waayo, waxaa helitaanka ah.
OpenAppMkt waa dukaan ah ciyaarta android la fikradda aad u khaas ah. Ayaa kulan ku qoran app yihiin oo dhan barnaamijyadooda web-ku salaysan taas oo macnaheedu ma aha in aad u baahan tahay si ay u rakibi u ciyaaro. Just guji ciyaar aad rabto inaad ka ciyaaro iyo in la furi doono loo siiyaa biraawsarkaaga. The functionalities iyo muuqaalada app aad la mid ah barnaamijyadooda hooyo noqon doonaa.
Ma doonaysaa inaad kala soo baxdo ka barnaamijyadooda ciyaaraha ugu wanaagsan ee android iyo Symbian? Phoload bixisaa Chine oo lacag la'aan ah oo si toos ah rakibi karo ee aad taleefan smart.
Platform: Symbian, Android 2.2 iyo wax ka sareeya.
PocketGear waa mid ka mid ah dukaamada app ugu da'da weyn laga heli karaa in dadka isticmaala ay. Waxaad kala soo bixi kartaa Chine oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Platform: Windows, Palm, Blackberry, Symbian iyo Android 2.2 iyo wax ka sareeya.
Ma rabtaa in aad u maamuli lahayd telefoonka smart si fudud? MobileGo waa xal sahlan in aad u baahantahay oo dhan! MobileGo taageertaa dhammaan qalabka socda ee android iyo macruufka oo ay ku jiraan iPad. Iyadoo MobileGo awood u helaan fudud ee telefoonka aad smart ka PC, maamulka awood badan kasoo muuqday waxaa meelo ka mid ah baakadaha software ugu waxtarka laga heli karo suuqa. Waxaad si fudud u soo bixi kartaa utility ka internet waxtar leh iyadoo aan wax lacag siisid beesadda hal.
Maxaad samayn kartaa la MobileGo?
MobileGo waa qalab heer sare ah oo muhiim u ah maaraynta dhamaystiran mobile. Tababaraha warbaahinta iyo tababaraha xidhmo lagama maarmaan noqon mid ka mid ah software maamulka ugu awood badan ee suuqa soo galeen. The feature kabashada sare waxaad ka caawisaa inay soo dhiciyaan xogta tirtiray kaaftoomi badan aan.
Mirroring aad android telefoonada smart la MobileGo!
Waxaad heli kartaa in aad telefoon smart aad kombuutarka iyadoo la kaashanayo MobileGo. Habkaani wuxuu ku mirroring ee MobileGo deyda shaashadda telefoonka smart ee aad kombuutarka. The benefits of mirroring ka mid ah content arkaysid shaashadda PC waaweyn, kala iibsiga fudud ee files oo fiican user-dhexgalka. Mid ka mid ah faa'iidada ugu weyn ee mirroring ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah dhibcaha ciyaarta wanaagsanaaday.
Sidee Mirror aad telefoon u dhibcaha sare ee kulan?
Talaabada 1: Waa in uu jiraa xiriir ka dhexeeya telefoonka smart iyo PC si ay awood muujinta mirroring. Xidhiidhinayo in la sameeyaa iyada oo cable USB ama Wi-Fi karo. Wixii xira telefoonka smart iyo PC iyada oo Wi-Fi, code QR waa in la marsiiyey.
Talaabada 2: Marka aad ku xiran telefoonka smart in aad PC, MobileGo caawinaysaa PC ee ay u aqoonsanaya, Kuna dhamaystirka geeddi-socodka mirroring.
Talaabada 3: Hadda isticmaasho mouse iyo keyboard inuu ciyaaro kulan aad jeceshahay si fudud, Kuna kor loogu qaado dhibcaha aad waqti!
> Resource > Emulator > Fantastic Android Game Saarashada Meelaha aad ka ogaato